ကြမ်းတမ်းသောစက်ကိရိယာများသည်အဘယ်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကြမ်းတမ်းသောစက်ကိရိယာများသည်အဘယ်နည်း။
views:200 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-22 မူလ:ဆိုက်ကို
ကြမ်းတမ်းသောစက်ပစ္စည်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထွင်းထုသည့်အခါပန်းပု၏နောက်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ကိုကျန်သည်အထိအပြင်ဘက်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်သည်။‘ပစ္စည်း၏ကြမ်းတမ်းသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ရပ်’။ အနုပညာရှင်များသည်ကျောက်ခဲများ (သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ) ကိုသူတို့မစခင်နှင့်၎င်းတို့ကိုမပုံဖော်မီ၎င်းတို့ကိုမထိရောက်မီသူတို့ကသေချာအောင်လုပ်ပါကျောက်ခဲများဖြစ်ကြသည်ကေးစကားဝှက်Pသန့်ရှင်းချောမွေ့။
အဆိုပါထွင်းထုပြားကြီးကြီးလျှင်ဒါဟာထွင်းထုရပါမည်နက်စွာlyကြမ်းတမ်းသောစက်ပစ္စည်းဖြစ်ထုံးစံအားဖြင့်အားဖြင့်လိုအပ်သောအချို့ tools များနှင့်ထို့နောက်ဖြစ်သင့်သည်artgrevနှင့်အတူ edဒဏ်ငွေပန်းပုဓား။ ဒဏ်ငွေထွင်းထုဓါးပါးသည်နှင့်ကောင်းသောထွင်းထုဓါး၏ feed ကိုဖြစ်သင့်သည်နှေးနှေးနှင့်သိပ်သည်း။ ဘယ်အချိန်မှာဒဏ်ငွေထွင်းထုနိုင်ပါတယ်မဟုတ်နှင့်အတူတ ဦး တည်းအလွှာ၌ပြုမိလိမ့်မည်ကိရိယာများကိုပြုလုပ်ခြင်းပန်းပု, ကြမ်းတမ်းသောစက်ကိုထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အလွှာနှစ်ခုထက်ပိုပါကအောက်ခြေတစ်ခုသည်ကောင်းမွန်သောထွင်းထုရမည်ဖြစ်ပြီးအပေါ်ဆုံးတစ်ခုသည်ကြမ်းတမ်းသောဓားဖြင့်မြန်ဆန်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
လူအများစုကစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်ကြမ်းတမ်းသောစက်များကိုသယ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့လုပ်နိုင်တယ်မည်သည်မှျt ကိုတစ်ကြိမ်မှာ 5mm သို့မဟုတ် 10mm ဖြတ်။ သူတို့ကတစ်ချိန်ကဖြတ်ဖို့ဓါးကြီးတစ်ခုလိုတယ်, ပြီးတော့သူတို့ကအနည်းငယ်ကိုထွင်းဖို့ဓါးသေးသေးလေးတစ်ခုလိုတယ်တစ်မီလီမီတာ၏ဒသမ။ ဟုတ်ပါတယ်,5မီလီမီတာထက်ပိုပြီးထွင်းထုထားတာလည်းရှိတယ်, အဲဒါကစက်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်အတွက်လိုအပ်ချက်မြင့်မားတယ်။
finishing တွင် chip နှင့်ကြမ်းတမ်းသောအသံပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
④အထူဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ tool tip offset ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.
3 ။Rလမ်းမေးမင်းMachiningTသစ်သားများအတွက် OolsCဂုဏ်ပြု
အရန်ကိရိယာများတွင်ပုဆိန်ကိရိယာများ (သစ်သားကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်မော်ဒယ်လ်အတွက်), (ကုန်ကြမ်းများဖြတ်တောက်ခြင်း, ဝါယာကြိုးဖြစ်အကြံပြုထားသည့်) သံတူ (ယေဘုယျအားဖြင့် Woodcut ကိုကူညီရန်ဓါး), ဖိုင် (ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းဘို့ဖြစ်နိုင်သောမျိုးဆင်ဖြစ်နိုင်သော file ကဲ့သို့ file) ဖိုင် တွင်အပေြာင်းရှေးဦးအဆင့်နှင့် rအတွက်ကြိတ်ကြိတ်cဂုဏ်ပြု) ။
အဆိုပါ worktable ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေသောအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်သစ်သား fix ရန်နှင့်အများအပြားရှိပါတယ်diy workbench ပစ္စည်းများ။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအရာတစ်ခုသည်သေးငယ်သောသို့မဟုတ်0ယ်နိုင်သည်မေးရိုးစားပွဲပေါ်မှာအပေါ်ညှပ်ရန်ဒု။ ဝါယာကြိုး Saw ၏စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီး function ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအပိုဆောင်းကိရိယာများဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
လျှပ်စစ် grinderပိုမိုထိရောက်သောနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသော Wood Cutter ၏လျှပ်စစ်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သစ်သားကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ြွလိင်တံကြိတ်စက်ထို့အပြင်ပါဝင်သည်လက် Grinder tool ကို,Power tool ကိုကြိတ်နှင့်Blade Grinder စက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့.
Oblique ဓါး, ပြားချပ်ချပ်ဓားနှင့် semife enice ဓါးလိုအပ်သည်။ နှင့်အတူထွင်းစဉ်အခါသစ်သားပန်းပုလက်ပတ်, ပျော့ပြောင်းသစ်သား ရဖြစ်ရွေးချယ်nထိုကဲ့သို့သော basswood, camphorသစ်သားစသည်တို့ကိုစသည်တို့
(5) chisel ထောက်ပြသည်
ထောက်ပြသောစယ်လ်များသည်လျင်မြန်သောကြမ်းတမ်းသောစက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကယ်. ၎င်းကိုထွင်းထုထားသောကျောက်တုံးများတွင်စနစ်တကျကျင့်သုံးပါကချွန်ထက်သောပခုံးများသည်ကြမ်းတမ်းသောစက်ယန္တရားများကအချို့သောပစ္စည်းများထုတ်ယူနိုင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် texture အပြိုင်မျဉ်းကြောင်းများကိုလည်း ထား. ကျောက်တုံးကိုရိုးရှင်း။ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
DIY Multi tool ကိုနိမ့်ကျသောစက်တိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Semi ပြီးဆုံးခြင်း, ပြင်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးခြင်း. နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲတင်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအဆင်ပြေစေရန်အဆင်ပြေပါသည်။
Woodworking ကိရိယာများ ဒဏ်ငွေပန်းပုဓား ကိရိယာများကိုပြုလုပ်ခြင်းပန်းပု diy workbench ပစ္စည်းများ လျှပ်စစ် grinder လက် Grinder tool ကို Power tool ကိုကြိတ် Blade Grinder စက် သစ်သားပန်းပုလက်ပတ် DIY Multi Power Tool